« Madagascar, arts de la Grande Ile »: mitohy ny fitsidihana amin’ny fampitana mivantana | NewsMada
« Madagascar, arts de la Grande Ile »: mitohy ny fitsidihana amin’ny fampitana mivantana
Efa ho roa volana izay ny nanombohan’ny “Madagascar, arts de la Grande Ile », fampirantiana ny tantaran’ny zavakanto malagasy sy ireo karazan-javakanto mampiavaka an’i Madagasikara. Hetsika tanterahina any amin’ny mozean’ny Quai Branly Jacques Chirac any Paris.
Mahaliana ny fampirantiana, saingy tsy vitsy ny tsy afaka mijery sy manovo fahalalana any. Ho fanomezana fahafaham-po azy ireo, hisy ny fitsidihana amin’ny alalan’ny fampitana an-tsary mivantana na “visite virtuelle”, tanterahina etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny 19 novambra sy ny 17 desambra izao.
Azo lazaina ho toy ny any an-toerana mihitsy rehefa manatrika izany, satria hisy mpanao famelabelaran-kevitra, ao amin’ny mozea, hanazava sy hampahafantatra ireo karazan-javatra jerena. Marihina fa mahita ny any anelanelan’ireo tabilao, ny sokitra, ny sary, ny hosodoko, sns, rehefa manaraka ity « visite virtuelle » ity.
Tsy mbola nisy hatramin’izay ny fampirantiana mikasika ny zavakanto malagasy sy ny tantarany, toy ity. Notsongaina manokana ireo zavakanto samihafa miisa 350 aranty ao noho izy ireo manan-tantara, manana endrika miavaka ary ahitana taratra ny fivoarana teo amin’ny vondrom-piarahamonina niaviany.
Raha fintinina, ampahafantarina ny mpitsidika, avy amin’ny firenen-tsamihafa, ny zavakanto sy ny tantara ary ny kolontsaina malagasy. Ankoatra ireo sanganasana mpanakanto samihafa, misy ny antontan-kevitra taloha sy ankehitriny azo jerena mandritra ny fampirantiana.